Fivoriamben’ny Firenena mikambana – New York : Manana ny anjara toerany amin’ny fandaminana ny raharaha iraisam-pirenena i Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaFivoriamben’ny Firenena mikambana – New York : Manana ny anjara toerany amin’ny fandaminana ny raharaha iraisam-pirenena i Madagasikara
21/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Anisan’ireo filoham-pirenena 193 mandray anjara amin’ny fivoriambe faha-72-n’ny firenena mikambana atao any New York, nanomboka ny 12 septambra lasa teo, ary hifarana ny 22 septambra ho avy izao, ny Filoham-pirenena Malagasy, Hery Rajaonarimampianina. « Atao laharam-pahamehana ny maha olona, hitolomana ny fametrahana ny fandriam-pahalemana », no lohahevitra nifantohan’ny asa sy ny fandraisam-pitenenana. Nandritra izao diany izao ihany koa, dia nihaona tamin’ireo Kaonsila malagasy any New York, ny filoha Malagasy. « Fivoriana lehibe no hita, ary dingana goavana no vita, satria raha tsy afa-niteny isika teo aloha teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, efa afa-manao izany isika ankehitriny. Tsy vitan’izany fa lasa manana andraikitra eo amin’ny fandaminana ny raharaha iraisam-pirenena », hoy izy raha namaritra ny toerana misy an’i Madagasikara ankehitriny. Porofon’izany ny nahavoatendry antsika ho filoha lefitra amin’ny fivoriamben’ny firenena mikambana, ary ny filoha malagasy no nitantana ny fivoriambe omaly. Nanamarika ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa ny fahombiazana dia vokatry ny fifarimbonan’ny tsirairay izay niasa tamim-pahatsiarovantena. Tsy hohadinony ihany koa ny handrisika ny Malagasy hanao izay tratra hahatratrarana ny fisandratana mirindra, ary hisitrahana amin’izay ny tena fandrosoam-pirenena. Nanatrika ny fihaonana ny minisitry ny Raharaham-bahiny Henry Rabary-Njaka, ny minisitry ny Toekarena sy ny planina Raveloharison, ary ireo ambasadaoro roa any Amerika Avaratra, zina Andrianarivelo Razafy sy Constant Horace. Omaly ihany koa dia nanatanteraka ny sonia mikasika ny fifanarahana momba ny fandraharahana ny fampiasana fitaovam-piadiana nokleary ny filoha Malagasy.
Tao anatin’ny fandaharam-potoanan’ny filoha Malagasy ihany koa ny fihaonana tamin’ny Mpandrindra tetikasa eo anivon’ny firenena mikambana, Achim Steiner. Nivoitra tamin’ny fihaonana ny lafin’ny fampandrosoana sy ny fifidianana amin’ny taona 2018.
Nivoitra tamin’ny fivoriambe izay notarihin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny slovaky, Miroslav Lajcak, ny voka-pirarohana mampivarahontsana eo amin’ny sehatry ny tontolo iainana. Navoitrany fa « lasa fanariam-pako ny ranomasina, ary manjaka ny tsy fanarahan-dalàna amin’ny jono. Raha mitohy izao tandrevaka izao dia ho betsaka kokoa noho ny trondro ny plastika any an-dranomasina amin’ny taona 2050». Ny filoham-pirenena Frantsay, Emmanuel Macron izay nitarika ny fivoriamben’ny fifanarahana maneran-tany mikasika ny tontolo iainana, kosa dia nandrisika ny mpitondra fanjakana ny amin’ny handaniana sy hampiasana ny fifanarahana manerantany mikasika ny tontolo iainana. « Ny firosoana amin’izany lalana izany ao anatin’ny roa taona, dia efa dingana goavana amin’ny fametrahana aro-fanina araka ny lalàna ho tombontsoan’ny rehetra », araka ny fanamarihany.
Tetsy ankilan’ireo rehetra ireo, nandray anjara tamin’ny fiaraha-misakafo nokarakarain’ny vadin’ny filoha amerikana Mélanie Trump, ny vadin’ny filoham-pirenena, Voahangy Rajaonarimampianina.